अहिलेसम्मकाे निर्वाचन परिणाममा काे कति अगाडि ? हेर्नुस् डाटा – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal December 8, 2017 | २२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १८:०१
काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकाे निर्वाचनकाे पछिल्लाे मत परिणाम अाउने क्रम जारी रहेकाे छ । प्राप्त पछिल्लाे परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभामा वाम गठबन्धन लाेकतान्त्रिक गठबन्धन भन्दा दाेब्बर अगाडि देखिएकाे छ । अहिलेसम्म नेकपा एमाले सबैभन्दा अगाडि देखिएकाे छ ।
एमालेले ५ स्थानमा विजय हासिल गरेर सबैभन्दा अगाडि देखिएकाे छ भने वाम गठबन्धनकाे अर्काे शक्ति माअाेवादी केन्द्रले १ स्थानमा विजय हासिल गरेकाे छ ।
त्यसैगरी काँग्रेसले अहिलेसम्म एक स्थान पनि जित्न सकेकाे छैन । उता प्रदेशमा एमालेले ७ स्थानमा विजय हासिल गरेकाे छ भने माअाेवादी केन्द्र ३ र नेपाली काँग्रेस १ स्थानमा विजयी बनेकाे छ ।
Be the first to comment on "अहिलेसम्मकाे निर्वाचन परिणाममा काे कति अगाडि ? हेर्नुस् डाटा"